Ilali edume ngokubona ukuzalwa kweMarquis de La Fayette kwinqaba yakhe, uChavaniac uyakwamkela ngokuthozama kuzo zonke iindawo zokuhlala ezi-2 ezidityanisiweyo. Yenzelwe ukuhlalisa abantu aba-2, intendelezo ebiyelweyo yabucala (30 m²). Kufuphi: Inqaba kunye ne-botanical conservatory, i-pizzeria kwilali, iLangeac kumgama oziikhilomitha ezili-12 (icawa ehlangeneyo, imyuziyam, umnyhadala waseSt-Gal ngoJulayi, imisebenzi yezemidlalo kunye namanzi amhlophe kwi-Allier ...), zonke iivenkile kunye neenkonzo ePaulhaguet (9 km ) okanye iLangeac. Indawo yokungena kumgangatho ophantsi ingena kwigumbi lokuhlala-ekhitshini (iTV yescreen esisicaba). Igumbi lokulala elinebhedi e-1 ephindwe kabini likumgangatho woku-1, njengegumbi lokuhlambela kunye nendlu yangasese eyahlukileyo. Ukufudumeza kombane kubandakanyiwe kwixabiso.
Nge-N102, thatha indlela ye-Chavaniac-Lafayette nge-D513. Elalini, landela umkhombandlela weholo yeDolophu, indawo yokulala ikwindawo yokuphumla yase-Place Washington.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Chavaniac-Lafayette